11 Qaab Oo Dabiici Ah Oo Loo Joojin Karo Timaha Daadanaya - Daryeel Magazine
11 Qaab Oo Dabiici Ah Oo Loo Joojin Karo Timaha Daadanaya
Timaha oo daataa waxa ay ka mid tahay mushkiladaha ugu waaweyn ee dadku ka cadwdaan, waxa aanay si gaar ah ugu badan tahay dadka ku nool dhulka xeebaha ah ee ay ruduubaddu ku badan tahay ama dhulka cimiladoodu sida kediska ah isu bed-beddesho, gaar ahaanna marka lagu jiro xilliga xagaaga.
Khubaradu waxa ay sheegayaan in sababta ugu weyn ee timaha oo daata keenaysaa ay tahay qofka oo si xun ula macaamila timaha. Sababaha keena timahan daadanaya waxa ka mid ah shaambooga oo isticmaalkiisa lagu talax tago, feedhista oo lagu badiyo iyo mishiinka timaha qallajiya oo isticmaalkiisa lagu badiyo. Waxa kale oo sabab u noqon kara jidhka oo ay ka dhiman tahay noocyo ka mid ah macdanaha ama Vitamin-nada ama qanjidhka thyroid oo wax qabadkiisu uu hoos u dhaco.
Waxa ay khubaradu sheegayaan in tiimaha oo si adag loo gunto ama lagu xidho qalabka dumarku isticmaalaan ee loo yaqaanno Roorimaha ama lagu badiyo isticmaalka maaddooyinka kiimikada ah iyo weliba timaha oo la raameeyo keeni karto inay daataan.
Haddaba, waxa jira habab badan oo mushkiladdan lagaga hor tegi karo waxaana ugu horreeya, qofka oo ka dheeraada kiriimada iyo walxaha ay warshaduhu u sameeyaan ka hor tagga daadashada timaha, waxa ay khubaradu aaminsan yihiin in maaddooyinka noocan ahi daadashada timaha muddo gaaban joojiyaan ka dibna ay timuhu halkii dib uga sii bilaabaan.
Akhriso: Cuntooyinka Timaha nafaqeeya quruxna u yeela
Haddaba, waxa ay khubaradu xalka arrintan ku soo koobeen qodobbadaan daryeelmagazine.com hoos ku xusayo:
– Timaha oo baarkooda hore faraqyo yeesho (Aflaaqo) haddii uu qofku isku arko waxa lagula talinayaa in uu Lixdii illaa Siddeedii toddobaadba mar xiiro baarka hore.
– Isku day in aad isticmaasho Balsamka (Conditioner-ka) Shaamboo kasta la socda, iskana jir in aad timaha ku maydho biyo la kululeeyey.
– Timaha ku furfur kordhfeed iskana jir in aad xoog ku dhex mariso, haddii ay timahaagu dheer yihiin waxa aad isticmaashaa saqaf ilkaheedu kala durugsan yihiin.
– Marka aad isticmaalayso mishiinka timaha qallajiya waxa aad isticmaashaa qaybtiisa qabawga ah, waayo dhibta ugu yar ee uu keeni karaa waa in uu madaxa ku keeno toxob.
– Si toddobaad leh timahaaga u mari Saliid Saytuun, ama Saliidda laga sameeyo midha (Garawga iyo qamandiga iyo saliidda laga sameeyo geedka Sisinta).
– Basasha ayaa iyaduna ka mid ah dawooyinka dabiiciga ah ee timaha ka ilaaliya daadashada, sababtuna waa in basashu ay firfircoonayso wareegga dhiigga isla markaana wanaajiso hab-wareeggiisa, sidaa awgeed waxa ay khubaradu ku talinayaan in madaxa lagu duugo basasha oo la ridqay muudkeeda.
-Cun cunto nafaqo leh, gaar ahaan cuntooyinka ay ku badan yihiin macdanaha iyo fiitamiinada ay ka mid yihiin Iron, Calcium, Potassium, Selenium, Magnesium, Vitamin C, E, B iyo weliba omega-3 door muhiim ah ayay ka qataan koritaanka timaha, halka haddii booratiinka qofku ku yaraadana timihiisu noqdaan qaar diciif ah oo daata aakhirka. Cuntooyinkaan waxaa ka mid ah, baradhada macaan, tufaaxa, babayga, khudaarta cagaaran, beedka ama ukunta, kalluunka, caanaha, looska, Sidoo kale ku dadaal inaad badsatid cabiska biyaha caadiga ah.
-Iska yaree kadeedka ama stress-ka sababtoo ah waxa uu ka mid yahay waxyaabaha keena in timuhu daataan.
Akhriso 6 Siyaabood oo aad stress-ka iskaga dhimi kartid
-Ku xoq timahaaga caleenta shaaha cagaaran (Green Tea) sababtoo waxaa caleentaan ku jidha maadooyin anti-oxidants ah oo ka hortaga in timuhu daataan isla markaana caawiya inay inay timuhu koraan.
Akhriso faaidooyina shaaha cagaaran
– Muus lagu dhex qasay Saliidda Lawska iyo malqacad yar oo malab ah, ayaa madaxa la marinayaa, muddo aan saacad ka yarayn ayaana loo deynayaa, ka dib waxa lagaga maydhayaa shamboo, waxa markaba la dareemayaa jileec iyo qurux ku siyaadday timaha.
-Si aad isaga joojisid timaha daadanaya, soo qaado Olive Oil, qandac ka dhig (KULAYL MA AHAN), kadibna timaha si fiican u mari, kadibna bac ku xidh una daa mudo 1 saac ah, kadib iska maydh adigoo shaambo isticaamalaya. Asbuucii hal ama labo sidaan samee, timahu salka ayay ka adkaanaya oo si fudud kuma go’ayaan.